Recipe ovy voatavo - Fomba Fanamboarana
recette ronono masiaka mamy vita amin'ny caramel
mandra-pahoviana no handrahoana ireo poketra pizza
kôkômbra voatabia dill crème salady
Recipe ovy voatavo
Ovy scalloped dia fomba fahandro mahazatra mahazatra, tonga lafatra amin'ny sakafon'ny Paska, Krismasy, Thanksgiving na ho an'ny sakafo hariva alahady fotsiny aza.
Ao anatin'ity lovia ity dia ovy sy tongolo voadidy manify no apetraka amin'ny saosy crème vita amin'ny trano mora ary alefa mandrapahafatiny sy volamena ary miboiboika. Fahalavorariana ovy!
inona no ao anaty omelet omera
Amin'ireo lovia lafarinina ovy rehetra avy Ovy natsatsika lafaoro ny Ovy voadio tonga lafatra , Tsy misy na inona na inona milaza sakafo mampionona toy ny ilany misy ovy voatsabo (afa-tsy ny menaka manitra ovy nopotsehina ).
Ka inona marina ireo ovy voatavo? Noheverina fa nipoitra tany Angletera, ny teny hoe 'scallop' dia famaritana amin'ny ankapobeny ny fomba fanapahana ovy. Ny ovy manify sy mitovy fanamiana dia arotsaka ao anaty vilia casserole ary avy eo rakotra saosy crème tongolo efa nohamainina ary endasina. Ny vokatr'izany dia ity recette ovy scalloped matsiro ity!
Ovy Ovy volamena Yukon (na ovy mena) manana hoditra malefaka ary tsy mitaky peeling (mitazona tsara ny endriny izy ireo). Ny ovy Russet na ovy Idaho dia hiasa fa mirona hisaraka bebe kokoa (nefa mbola matsiro ihany).
tongolo Ny tongolo dia manampy fofona be dia be amin'ity fomba fahandro ity ary fangaro mahazatra. Sasao manify be.
Sauce crème Saosy fanosotra haingana vita amin'ny lafarinina, dibera, ronono ary ron-kena. Raha te-hanampy fromazy ianao dia esory ny saosy amin'ny hafanana ary aforaho amam-bika vita amin'ny fromazy roapolo na roa. Hiempo izy noho ny hafanan'ny saosy.
zavamanitra Ny tsiro kely amin'ity fomba fahandro ity dia misy sira, dipoavatra, tongolo, tongolo lay. Ampio amin'ny tianao manokana ao anatin'izany ny thyme, rosemary, persily.
ny fomba fanesorana jello amin'ny lasitra plastika
Fomba fanamboarana ovy mihantona
Mila fotoana ny fanaovana ovy voahitsakitsaka hatramin'ny voalohany, saingy mora izany. Na dia tsy manana fromazy aza ny ovy tena nohamainina dia manampy kely indraindray isika!
Slice ovy sy tongolo kely.
Manaova saosy an-trano (fomba fahandro etsy ambany)
Ovy, tongolo ary saosy sosona. Sarony ary endasina.
Esory ny foil ary manendasa kely kokoa, ity dingana ity dia mamorona ilay tampony volontsôkôlà matsiro amin'ny ovy voahidy
ZAVA-DEHIBE Mangatsiatsiaka 20 minitra alohan'ny hanompoana mba hamelana ny saosy.
Torohevitra ho an'ny ovy tonga lafatra
Sasao ny ovy mitovy mba hahazoana antoka fa mahandro tsara ny ovy scalloped
Mampiasà a mandolin hahatonga ity asa ity ho haingana kokoa (a Mandine $ 25 tahaka ity manao asa tsara ary hamonjy anao fotoana betsaka)
ny sakamalaho no fototry ny a saosy mamy . Ny roux dia midika fotsiny hoe mahandro tavy (amin'ity dibera ity) sy lafarinina ary asio ranoka hanaovana saosy!
Raha manapa-kevitra ianao ampio fromazy amin'ny saosy (izay hanamboatra ireo Ovy Au Gratin ) esory ny saosy avy ao amin'ny fatana ary afangaro ao anaty fromazy 1 1/2 ka hatramin'ny 2 kaopy (safidy tsara ny cheddar / gruyere).
Vanim-potoana ny ovy misy sira sy dipoavatra eo anelanelan'ny sosona.
Saronana amin'ny foil rehefa masaka izy io, mamela azy hikotroka sy ny ovy maniry ho haingana kokoa.
Mba hahatonga ny ovy misy scalloped mialoha ny fotoana
Mba hanaovana izany mialoha ny fotoana (ary hitazomana ny fahandroana haingana amin'ny andro anaovana) dia notsapainay tamin'ny ampahany ny nandrahoana azy ireo tamin'ny vokatra lehibe.
koa manendasa ny lovia nandrakotra 50-60 minitra.
Esory ao anaty lafaoro ary mangatsiatsiaka tanteraka eo amin'ny latabatra (avelao hisaron-tava izy ireo, ny etona dia hanampy amin'ny famitana ny fahandroana).
Sarony tsara ary vata fampangatsiahana .
Amin'ny andro anompoana dia esory amin'ny vata fampangatsiahana farafahakeliny 30 minitra alohan'ny hanendasana. Mofomamy tsy mihanjahanja mandritra ny 35 minitra na mandra-pahafana.
Resety ovy bebe kokoa tianao
Ovy nendy indroa - Ataovy mialoha & mangatsiaka!
Ovy voaendy lafaoro mora
Mofomamy ovy voatoto alaina - Tsara ho an'ny ambiny.
Casserole ovy voaendy indroa
Cheesy Ham sy Ovy Casserole
Lasopy ovy nendasina - Sakafo mora amin'ny herinandro
Fotoana fanomanana25 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo1 ora roa-polo amby minitra Fotoana fitsaharanadimy ambin'ny folo minitra Fotoana manontolo1 ora Efatra Dimy minitra Fanompoana6 servings MpanoratraHolly Nilsson Ny Ovy misy volo no vilany ovy tonga lafatra! Ovy malemy ao anaty saosy mamy voatabia nopetahana tamin'ny fahalavorariana volamena. pirinty Pin
▢1 ankamaroan'ireo tongolo diced
▢¼ kapoaka koba tsara toto
▢rOA kaopy ronono
▢1 kapoaka ron-kena
▢¼ sotrokely sakay
▢3 kilao ovy fotsy notetehina somary matevina '
Afanaina hatramin'ny 350˚F ny lafaoro.
Mba hanaovana ny saosy, menaka dibera, tongolo ary tongolo gasy amin'ny hafanana ambany. Andrahoy mandra-pahalefaka ny tongolo, tokony ho 3 minitra. Ampio lafarinina ary andrahoy mandritra ny 1-2 minitra.
Ahenao ambany ny hafanana. Atambatra ny ronono sy ny ron-kena. Manampia vola kely isaky ny mandoa mikitroka. Ho lasa matevina be ilay fangaro, manohy manisy ranon-javatra kely isaky ny mandoa mandra-malama.
Raha vantany vao nampiana ny ranoka rehetra dia andrahoy amin'ny hafanana antonony ary manohy mikorisa. Afangaroy ny sira sy ny dipoavatra ary avela handrahoana 1 minitra.
Manosotra lovia fanendasa 9'x13 '. Apetraho ao ambanin'ny ⅓ ny ovy ary asio sira sy dipoavatra. Araraka eo amboniny ny ⅓ ny saosy saosy fanosotra.
Avereno sosona mifarana amin'ny saosy crème. Sarony ary endasina mandritra ny 45 minitra.
Saraho ary endaso mandritra ny 35-45 minitra fanampiny na mandra-pahatonga ny volontsôkôlà volamena sy ovy. Andrahoy mandritra ny 3-4 minitra hahazoana top volamena.
Avela hiala sasatra mandritra ny 15 minitra alohan'ny hanompoana.
Kaloria:286,Karbohidraty:39h,Proteinina:9h,Tavy:iraika ambin'ny foloh,Tavy mahavoky:7h,Cholesterol:30levitra,Sodium:484levitra,Potasioma:1122levitra,Fibre:6h,Sugar:5h,Vitamina A:465IU,Vitamina C:30.8levitra,Kalsioma:179levitra,Vy:7.7levitra
Teny lakileovy nopetahana Mazava ho azySakafo an-daniny masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny ovy voatavo sy au gratin?
Ovy au Gratin antsoina koa hoe ovy cheesy satria ny saosy fotsy dia saosy fromazy (ary matetika izy ireo dia misy fromazy hafafy eo anelanelan'ny sosona sy / na ny mofo asiana mofo).
inona no hotompoina amin'ny lasopy tortilla akoho
Ity fomba fahandro ovy scalloped ity dia azo (mazava ho azy) asiana fromazy na ampiana fromazy nefa tiako indraindray ny fahatsorana ao amin'ity fomba fahandro ity raha tsy misy fromazy. Ny hamamin'ny tongolo sy ronono no fanampiana tonga lafatra amin'ireo ovy voadidy ireo!
Azonao atao ve ny mangatsiaka ovy mitam-piadiana?
Ireo ovy ireo dia hitazona ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 4 andro ary hafanaina tsara ao anaty microwave, lafaoro na ao anaty lapoaly! Raha te-hampangatsiaka azy ireo ela kokoa ianao, eny, azo ovaina ny ovy nopetahana!
Saika ny lovia casserole rehetra dia azo averina mivaingana tanteraka amin'ny fahalalana kely. Raha manao sakafo mangatsiatsiaka ianao, ny fomba tsara indrindra hampangatsiahana ovy an-koditra dia ny tsy fandrahoana azy ireo amin'ny fomba rehetra, fa avelao izy ireo ho kely masaka. Avy eo, rehefa mangatsiaka ao anaty vata fampangatsiahana izy ireo, zarao amin'ny lalana tianao izy ary aforeto tsara alohan'ny hametrahana azy ao anaty vata fampangatsiahana. Mba hamerenanana indray dia atsoniho ary farano ny fandrahoana mandra-pitolon'ny ovy indray!
Na dia safidy tsara aza izany dia matetika isika no mila manaparitaka ny ambiny. Amin'ity tranga ity dia mihamangatsiaka tsara ireo ovy mihombo ireo, na dia hitako aza indraindray dia misaraka kely izy ireo rehefa naverina haverina nefa mbola matsiro ihany!
Avereno ity Casserole Fantastic ity
antsasaky ny ampahatelon'ny kaopy